Ukucwiliswa ngokufanelekileyo kwamakhukhamba kwi-greenhouse, umhlaba ovulekile, umgangatho, ifoto. Ukunkcenkceshela iikomkom kwiibhotile - ividiyo
Ukucoca ngamakhukhamba ngemvubelo
Abanikazi abaninzi beendawo zelizwe kufuneka banike ubuncinane imibhede embalwa ngamakhukhamba. Enyanisweni, le mifuno i-crispy "ehlaza njalo" iyimveliso yendalo yonke, ekusebenziseni kwayo iyancwina ngokufanayo nayiphi na indlela-ehamba ngamanxweme, esetyuwa kwaye "nje". Nangona kunjalo, iikhukhamba ezikhulayo zidinga iimeko ezithile, ukugcinwa kwayo okubangene nomphumo omkhulu wokugqibela. Ngoko, umhlaba kufuneka uvelise, kunye nokugqoka okuphezulu kunye nokungena kwamanzi. Ngendlela efanelekileyo ukulungiselela ukuthambisa iikomkom kwi-greenhouse kunye nomhlaba ovulekileyo? Namhlanje siza kutyhila ezinye iimfihlelo zamalimi abanolwazi.
Ukukhupha iikomkom kwi-greenhouse: iingcebiso kunye neengcebiso (imizobo, iifoto, ividiyo) Ukutyilisa ngokufanelekileyo iikomkom kwi-sesekethe, umfanekiso, ividiyo
Ukukhupha iikomkom kwi-greenhouse: iingcebiso kunye neengcebiso (imifanekiso, iifoto, iividiyo)
Kwizithuba zethu zokulima, ukulima kuqhutyelwa kwiindawo zokugcina izityalo ze-polycarbonate kunye neendawo zokugcina izityalo, ezivumela isivuno "esinokubuyiselwa".
Iikhukhamba zibhekwa njengesityalo esinomswakama, ngoko kubaluleke kakhulu ukugcina izinga elithile lomswakama. Enyanisweni, ubuninzi bamanzi buyakhupha ukubola kweengcambu, kwaye ubuninzi bomswakama kwi-greenhouse yi-oksijini yindlala. Oku kwandisa umngcipheko weempapasho ezifa kunye nokutshatyalaliswa kweziqhamo.
Yintoni eqhelekileyo yokuthambisa iikomkom kwi-greenhouse? Ngaphambi kokwakheka kwe-ovary, isityalo siniselwa rhoqo iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-7, i-3 ukuya kwe-4 ilitha yamanzi nganye kwi-square meter. Ngokubonakala kweentyatyambo kunye nokuqala kwefruiting, isiqhelo senyukela kuma-6 ukuya kwe-12 ilitha kwindawo enye, kunye nexesha eliphakathi kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3. Kwiintsuku ezibandayo okanye ezinamafu, kuvunyelwe ukwehla ukunkcenkceshela.
Indlela yokucoca ngamanzi ukhukhamba kwi-greenhouse - umbutho wenkqubo
Ukuhambisa izityalo kwi-greenhouse kufanelekile kuphela kumanzi afudumeleyo, ukwenzela ukuba ugweme ukuphuhliswa kwengcambu. Ukuthulula amanzi kufuneka kube kwiimithombo ezikhethekileyo phakathi kweentsika, kwaye zingasondelanga ingcambu ngokwazo. Ngaphandle koko, ukuvezwa kweengcambu, eziyeke ukukhawuleza ekukhanyeni, ziyakwenzeka-oku kuchaphazela kakubi umgangatho kunye nobungakanani besityalo. Ngoko ke, imeko enjalo imele ilungiswe ngokukhupha iingcambu ezivulwe.
Ukukhupha iikomkom ku-greenhouse
Ungayinisela njani iikomkom kwi-greenhouse - imithetho eyintloko
Ngethuba lokunisela, kufuneka kuthathelwe unyameko ukuze umhlaba ujikeleze izityalo zomile, ukugwema ukubola izimpande kunye neziqu. Ukuba isimo sezulu sitshisa ngaphandle, iikomkom e-greenhouse zineengxaki "zokuphefumula". Ukunciphisa ubushushu kuya kunceda amanzi aqhelekileyo, okucetyiswayo ukupakisha kwiglasi yokubasa. Ngenjongo efanayo, isisombululo esinobuthakathaka esinokusilela singasetyenziselwa.
Nangona kunjalo, ngobushushu obunzima, le miqathango kaninzi ayivelisi iziphumo kunye namaqabunga aphelile. Iikhukhamba "kwiimvakalelo" zingeniswa ngokupomfa ngamanzi ukusuka ekutheni, malunga neekitha ezintlanu kwihlathi.
Ngakanani ubushushu obufanele kube ngamanzi? Phantse ukufana nobushushu bomhlaba. Inani elifanelekileyo kakhulu li-20 ° C.
Ufanele uphuze nini na ukhukhamba? Ixesha elona lihle kakhulu kusasa, xa ukukhuphuka kwamanzi kuphantsi, kwanokuhlwa (ngaphambi kokushona kwelanga).
Ukunkcenkcenkceshela kwiibhotile zeplastiki zamakhukhamba kwi-greenhouse
Inkqubo yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela iyona nto iphezulu kakhulu kwezi zizathu zilandelayo:
ukufikelela kwiindawo ezinkulu
ukufakwa lula kunye nokusebenza
ukuchasana nokutshintsha kweqondo lokushisa kunye noxinzelelo lwangaphakathi
Xa kuncibilikiswa kwamanzi okunkcenkceshela kunokwenzeka ngeendlela ezimbini:
Kwimeko yokuqala, isakhono esikhulu sokugcina amanzi kunye nesigxina kuyadingeka kwinkqubo yokukhupha. Kufuneka ubuye uthenge iphampu kunye ne-valve kunye ne-hose eneembobo ezahlukeneyo.
Ukukhupha iikomkom ehlabathini
Ukuqala, sakha isiteji esinokuphakama okungafaniyo-oku kudala uxinzelelo olufunekayo ukuze amanzi angene kwi-hose. Ikhusana iphakanyiswa kwaye igxininiswe ekuphakameni okuchanekileyo. Ngoku unamathele i-crane kwi-tank, ekuphakameni kwe-10 cm ukusuka emhlabathini. Kwi-crane iqhotyoshelwe i-hose kunye nemigodi kunye nobude obude kumgama we-30 cm omnye komnye. Sinepayipi kufuphi nemibhede.
Xa amanzi angenelela kumanzi kwi-hose, sibeka umda woxinzelelo. Nangona kunjalo, kule meko amanzi aya kupholisa, okungahambi kakuhle kwizityalo. Ngoko kuyacetyiswa ukuba ukhethe indlela yokuqala, kuba amanzi kwitanki inexesha lokutshisa.
Yaye nendlela yokulungiselela ukunkcenkceshela okufudumeleyo kwamakhukhamba ngokusebenzisa umbhobho wamanzi? Ngosizo lwevidiyo uza kufunda iimfihlelo zeengcweti.
Ukucwiliswa ngokufanelekileyo kwamakhukhamba kwi-sesekethe, umfanekiso, ividiyo
Umbutho wale nkqubo uzimisele ngethuba lokukhula kunye nophuhliso lwesityalo. Ngaphambi kokubonakala kweentyatyambo inqanaba lokunisela li-5 - 7 ilitha amanzi ngamitha nganye, nganye ezintlanu iintsuku. Ngokufika kweentyatyambo kunye neziqhamo, ubuninzi bomswakama kunye nexesha lokunisela liyanda - ubuncinane kanye ngosuku.
Emva kokutyala izityalo kwiindawo ezivulekileyo, izityalo zixutywa kakuhle kwaye zinike ixesha lokusetyenziswa kwezimo ezintsha. Ukuze kugcinwe umswakama, kucetyiswa ukuba umququzelele umhlaba, kunye neveki kamva ukuqala ukuthambisa rhoqo.
Unganisela njani ukhukhamba? Ukusebenzisa ukuhlambela kunakho ngaphandle "kwesawa", ngokukhawuleza uthele amanzi, uzame ukuhlamba umhlaba. Ubume bokunkcenkceshela kuxhomekeke kubushushu bomoya kunye neempawu zomhlaba.
Ukuba unqwenela, unako ukwenza i-automate inkqubo yokutyilisa ngokuhlela inkqubo ye-drip kwisayithi. Isixhobo sale nkqubo sifana ne-drop system kwendawo yokugcina izityalo, ngoko ke umbhobho omkhulu kunye ne-hose kuyakufuneka. Nangona kunjalo, ukungonakali kweli khetho kukuba amanzi aya kuhamba ngokukhawuleza. Ngoko kufuneka unamathele ibhotile kwindawo nganye kwifowuni.
Yintoni yokwenza ukuba amaqabunga aphuzi amakhukhamba? Iingcebiso ezifanelekileyo kakhulu apha
Ukunkcenkceshela iikomkom kwiibhotile zeplastiki emhlabeni
Le nguqulelo elula kwaye enokuhlawuleka yokunkcenkceshela, okungafuneki naziphi iindleko zokufakelwa ezizodwa. Sithatha ibhotile yeplastiki, sinqunyulwe phantsi, kwaye esiqongweni senza imingxuma. Ngoku ugaye kwi "polivalku" embhedeni eduze kwesiqithi samakhukhamba uze ugcwalise ngamanzi. Kancinci, i-liquid iya kuphuma emingxondweni yesiqhekeza, kwaye yondle inkqubo yengcambu yesityalo. Kuhlala kuphela ukuzalisa iimithombo zamanzi ngexesha kwaye akudingeki uxhalabele ngokusela.
Iindlela zokupheka ezilula kunye nezixhamlayo ze-strawberry jam apha
Njengokuba ugqoke phezulu, ungaphakamisa namakhukhamba ngemvubelo - ukuvuselela ukukhula kwezityalo kunye neziqhamo. Silungiselela isisombululo se-10 grams yemvubelo eyomileyo kunye neelitha ezili-10 zamanzi afudumeleyo. Emva kokupheliswa, engeza 50 gr. ushukela, sinyanzelisa iiyure ezimbini kwaye ngaphambi kokuthambisa kwakhona sidibanisa ngamanzi (50 ilitha).
Indlela yokulungisa kakuhle iitato kwi-greenhouse kunye nomhlaba, khangela apha
Ukukhupha iikomkom kwi-greenhouse kunye nombhede, kwindawo evulekile inokuhlelwa ngeendlela ezininzi, kubandakanywa ukuqhuma, ngokusekelwe kwizakhono kunye nezakhono. Nangona kunjalo, iinzame ezenziweyo aziyi kudlula ize-umvuzo womgadi wegadi osebenza nzima uya kuba ngumvuno oluninzi lweemikhukhamba e-elastic "yokwenza".
Ukutyilwa kwezityalo zangaphakathi
Indlela yokugcina ulutsha emva kwe-30: landela imithetho emi-5 elula!
Ukuhlaziywa kwesikhumba esomeleyo
Indlela yokulwa neentloni ebhedini
Ixesha lokuzala labesetyhini kumanani
Ukutya kweShokoleji ukulahleka kwesisindo
Umlilo kwindawo yangaphakathi yanamhlanje
Iphupha lokuthengiswa likhanseliwe: "intsholongwane" yaseAgedonia
Iimfuno ezinomdla ngoFebruwari 23, oogxa abathandana nabo - Abafutshane bayancoma abafunda nabo kwi-sms, kwivesi kunye neprose ngamazwi abo
Ukuphuhliswa koonxibelelwano lomntwana kunye nabadala kunye noontanga